Niyad jabka kulaylaha wuxuu halis gelinayaa inuu burburiyo Costa Rica, Nicaragua iyo Honduras | Saadaasha Shabakadda
Xilligii duufaantu weli ma dhammaan. Ilaa Nofeembar 15, weli waxaa jira khatar weyn oo ah duufaano halista ah oo soo ifbaxaya. Hadda, diiqad kulaylaha ayaa khatar galinaysa Costa Rica, Honduras iyo Nicaragua, wadamadii horey u howlgaliyay digniinta cas cas roobab culus awgeed.
Nidaamkan, oo la sameeyay shalay oo Arbaco ahayd, wuxuu durbaba waxyeelo u geystey nafta qofka
1 Waxyeellada niyad-jabka kulaylaha
2 Jawiga murugada kuleylka
Waxyeellada niyad-jabka kulaylaha
Niyad jabka kuleylka waa dhacdo sababi karta dhaawac weyn. In Managua, shalay waxay ku khasbanaadeen inay daad gureeyaan ilaa 800 oo asaliga ah kuwaas oo ku nool Misquitos Cays sababo la xiriira halista sare ee roobka iyo duufaanka duufaanka, kuwaas oo u hanjabaya bulshada ku nool xeebta iyo jasiiradaha Caribbean-ka. Dhab ahaan, Talaadadii roob da’ayey ayaa hal qof ku dhintey Nicaragua: waa nin 29 jir ah oo wata gaari xamuul ah, kaas oo uu qaaday webi ka tirsan waaxda bari ee Chontales.
Saddex sarkaal caafimaad ayaa la waayey Arbacadii. Waxay sidoo kale ku safrayeen gaari xamuul ah, oo ku dhacay webi markii ay ka gudbayeen buundada magaalada Juigalpa, ee Chontales.
Waqtigan xaadirka ah, ma jirin wax dhaawac ah, laakiin Guddiga Gurmadka Qaranka (CNE) ee Costa Rica ayaa ku dhawaaqay digniin casaan ah Arbacadii inta badan dhulka, oo ay ku jiraan xeebta Baasifigga iyo bartamaha dalka. In kasta oo niyad-jabka uusan u badneyn inuu si toos ah u saameyn ku yeesho gobolka, haddana wuu saameeyaa waxay sababi kartaa koror bararka xeebta badda Baasifigga, marka lagu daro xoojinta roobabka.
Honduras, sida Costa Rica, wax dhibaato ah oo soo gaadhay ma jirto, laakiin way feejigan tahay. Khamiista waxaa la filayaa inay u dhowaato xeebta Nicaraguan ka dibna u gudubto bariga Honduras, si ay ugu laabato Caribbean-ka qeybteeda waqooyi-galbeed Jimcaha.
Honduras waxay abuuri doontaa daruuro iyo roob, gaar ahaan waqooyiga dalka. Waxaa la filayaa inay sii xoojiyaan jimcaha.
Jawiga murugada kuleylka
Niyad jabka kuleylka waxaa lafilayaa inay dhaafto iyada oo loo marayo Nicaragua iyo Honduras, iyo berri oo jimce ah waxay gaari kartaa xeebta Caribbean-ka ee Mexico. Halkaas, waxay ka sii socon doontaa woqooyi, iyadoo gaari doonta cirifka koonfur-bari ee gobolka Mississipi, koonfurta Alabama iyo waqooyi-galbeed Florida sida duufaan.
Wixii warar ah waan sii wadeynaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Niyad jabka kulaylaha wuxuu halis gelinayaa inuu burburiyo Costa Rica, Nicaragua iyo Honduras